Daawo: Afar sano, kadib xuska qaraxii 14-ka October (Warbixin) | Dalkaan.com
Home Warkii Daawo: Afar sano, kadib xuska qaraxii 14-ka October (Warbixin)
Muqdisho (dalkaan) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya maanta oo kale sanadkii 2017-kii waxaa isgoyska Zoobe ka dhacay qarax aad u xoogan oo noqday kii ugu dhimashada badnaa weeraradii iyo qaraxyadii ka dhacay guud ahaan Soomaaliya.
Afar sano ayaa haatan ka wareegatay xasuuqaasi oo aan weli ka bixin xasuusta dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ehellada ay dadkooda ku dhinteen weerarkaasi.
Dhimashada ka dhalatay qaraxaas ayaa gaartay ku dhowaad kun qof, halka ay ku agoontoobeen illaa 1547 carruur ah oo waalidiintooda ay ku dhinteen musiibadaasi.
Sidoo kale waxaa ku hanti beelay ganacsato badan oo dukaamo, hoteelo, maqaayado iyo goobo kale oo ganacsi ku lahaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Qaraxii Zoobe oo sanad, kadib dadkii ku dhintay ay taallo u dhistay dowladda, taas oo laga taagay bartamaha isgoyska ayaa waxaa dhacdadaasi maskaxdooda raad iyo saameyn xun ku reebtay malaayin qof oo Soomaali oo illaa hadda uusan xasuustooda ka go’in qaraxaasi.
Ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi baahalnimada ahaa oo loo adeegsay gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, hase’yeeshee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay kooxda Al-Shabaab oo weeraro ka fulisa gudaha dalka.
Dhinaca kale Qaramada Midoobay ayaa war kasoo saartay xuska 14-ka October oo maanta ku beegan, waxaana xafiiska QM uu shaaciyey inuu muraga la qeybsano Soomaalida.
“Iyadoo Soomaalidu ay maanta xusayso sanad-guuradii afaraad ee qaraxii Muqdisho ee 14-kii Oktoobar 2017, kaas oo sababay dhibaato iyo burbur aad u badan, ayey bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya xusuusaneysaa dhibbanayaashii iyo kuwii ku dhaawacmay, waxa ayna barbar-istaag u muujineysaa dhammaan Soomaalida,” ayaa lagu yiri.
Halkan hoose ka daawo: warbixin dareenleh oo uu Shabelle TV ka diyaariyey qaraxii 14-ka October.
Previous articleMaxay tahay aragtida garyaqaanada Somalia ee go’aankii ICJ?
Next articleThomas Frank oo ka hadlay in lala Xiriiriyo Shaqada kooxda Arsenal
Xiddiga Manchester United Paul Pogba oo diiday inuu meesha ka saaro...
Paul Pogba ayaa qirtay inuu weli xiriir la leeyahay qaar ka mid ah asxaabtiisii ​​hore ee Juventus isla markaana uu jecel yahay Turin ka dib markii...
Iran oo ku dhowaatay inay hesho Nukliyeer iyo xog cusub oo...
Xog: Sida ay Soomaaliya iyo Kenya u kala heleen xirmooyinka shidaalka...
Xog: Sababta loo baajiyey shirkii lagu shaacin lahaa xaqiiqda kiiska Ikraan...
Madaxweyne Clinton oo isbitaal la dhigay iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladiisa
Real Madrid oo fursad loo siisay saxiixa Christopher Nkunku
Sawiro: Ciidamada Itoobiya oo mar kale duqeeyey caasimadda ismaamulka Tigray